Mitohy hatramin'ny fiterahana ny fotoana foetale.
Eo amin'ny herinandro 9 , manomboka mitsetsitra ankihibe Ary afaka mitelina fluide amniotique ny foetus.
Afaka mamihina zavatra mafy koa izao ny foetus, manetsika ny loha mandroso na miverina, manokatra na manidy valanorano, manetsika ny lela, misento ary mihinjitra.
Ny récepteurs ny nerfs amin'ny tarehy,fela-tanana, Ary ny faladian-tongotra dia afaka mandre rehefa kasihina kely.
"Rehefa kasihina maivana ny faladian-tongotra," hamoritra ny maoja sy lohalika ilay foetus ary mety hamolaka ny rantsa-tongony.
Ny hodi-maso izao dia mihidy tanteraka.
Ao amin'ny larynx, ny fitrangan'ny ligaments vocaux dia mampiseho ny fanombohan'ny cordes vocales.
Eo amin'ny foetus vavy, efa hita ny utérus ary cellules fiterahana tsy matotra, atao hoe ovogonie, dia hita indray ao amin'ny ovaire.
Manomboka miavaka ny appareils génitaux ivelany eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Fitomboana lehibe amin'ny herinandro 9 sy 10 Dia mampitombo ny lanjan'ny vatana eo amin'ny 75%.
Amin'ny herinandro 10, rehefa tairina ny hodi-maso ambony dia mikodiadia mihidina ny maso.
Manoaka ny foetus ary matetika manokatra na manidy vava.
Ny ankabiazan'ny foetus dia mitsetsitra ny ankihibe havanana.
Ampahan'ny intestine ao anatin'ny tadim-pôtra dia miverina ao amin'ny cavité abdominale.
Mitohy ny ossification amin'ny ankabiazan'ny taolana.
Manomboka mitombo ny hohon-tongotra sy tanana.
Herinandro 10 aorian'ny fampiraisana no hita ny printy ny rantsan-tanana. Ireo dia afaka ampiasaina hamatarana ilay olombelona mandritry ny fiainany manontolo.
Amin'ny herinandro faha-11 ny orona sy ny molotra dia voaforona tanteraka. Ohatran'ny ampahany hafa amin'ny vatana dia hiova araky ny fiainan'ilay olombelona ny hendriny.
Manomboka mitelina glucose sy rano ny intestin ary hatelin'ny foetus koa.
Na dia ny fampiraisana aza no manoro ny ho maha-lahy sy vavy amin'ny fertilization, Ny appareils génitaux ivelany izao dia efa hita na lahy na vavy.
Amin'ny herinandro 11 sy 12, dia mitombo 60% eo ho eo ny lanjan'ny foetus.
Ny herinandro 12 dia mamarana ny trimestre voalohan'ny maha-bevohoka.
Ny vava izao dia maheno tsimon'ny tsiro miavaka.
Amin'ny fiterahana , ny tsimon'ny tsiro dia hijanona eo amin'ny lela sy ao ambonin'ny vava.
Ny fihetsikin'ny tsinay dia manomboka amin'ny herinandro 12. ary mitohy mandritry ny 6 herinandro eo ho eo.
Ilay zavatra havoakan'ny colon foetal-ny zaza vao teraka dia atao hoe meconium. Izy io dia misy enzymes digestives, proteines, ary cellules maty narian'ny tract digestif.
Amin'ny herinandro 12, ny halavan'ny rantsaka ambony dia efa hahatratra ny halehibeny farany eo amin'ny halehiben'ny vatana. Ny rantsana ambany dia elaela kokoa vao mandray ny halehibeny farany.
Hafa-tsy ny aoriana sy ny ambonin'ny loha, ny vatan'ny foetus rehetra izao dia mamaly rehefa kasihina maivana.
Ny fitomboana araky ny maha-lahy sy maha-vavy dia manomboka hita. Ohatra, ny foetus vavy dia mampiseho fihetsikin'ny valanorano matetika kokoa noho ny lahy.
Ny zavatra samihafa amin'ny tetsy ambony koa dia raha kasihina ny eo akaikin'ny vava dia mahita fihodinana eo amin'ny stimulus ary dia mivoha ny vava. Io fihetsika io dia atao hoe "rooting reflex" ary io dia mitohy aorian'ny fiterahana, manampy ilay zaza vao teraka ahita ny nonon'ny reniny rehefa minono.
Mitohy ny fitomboan'ny tarehy ary manomboka misy tavy mipetraka eo amin'ny takolaka ary manomboka koa ny fitomboan'ny nify.
Amin'ny herinandro 15, tonga ao amin'ny tsokan- taolana ary mihamaro ny cellules-ndrà . Ny ankabiazan'ny fitomboan'ny cellule-ndrà dia mipointra amin'io fotoana io.
Na dia manomboka amin'ny herinandro faha-6 aza ny fihetsik'ilay embryon ny vehivavy bevohoka dia mandre ny fihetsiny anelanelany herinandro 14 sy 18. Taloha dia atao hoe quickening io fotoana io.
Amin'ny herinandro faha-16, ny fomba izay mitarika fampidirana fanjaitra ao amin'ny kibon'ny foetus dia mitondra valina stress hormonal ary mamoaka noradrenaline, na norepinephrine, ao anaty fikorian'drà. Ny zaza vao teraka sy ny olona matotra dia samy mitovy fihetsika rehefa eo anatrehan'ny procedures vahiny.
Ao amin'ny système respiratoire dia efa ho tanteraka izao ny hazo bronchiale.
Zavatra fotsy miaro atao hoe vernix caseosa, izao no manodidina ny foetus. Ny vernix dia miaro ny hoditra amin'ny zavatra manelingelina avy amin'ny fluide amniotique.
Manomboka ny herinandro faha-19, ny fihetsiky ny foetus, ny fomba fiainana, ary ny fitempon'ny fo dia manaraka Cycles izay miseho isan'andro atao hoe rythmes circadians.
Afaka herinandro 20 ny cochlea, ilay organe fandrenesana dia efa nahatratra ny halehibeny ao amin'ny sofina intérieure izay efa miforona tanteraka. Manomboka izao dia hamaly feo samy hafa bebe kokoa ilay foetus.
Ny volo dia manomboka maniry eo amin'ny loha.
Efa nitranga sy vonona daholo ny sosona amin'ny hoditra, ao anatin'izany ny follicules sy glandes-n'ny volo.
Amin'ny herinandro 21 ka hatramin'ny 22 aorian'ny fampiraisana, efa afaka miaina rivotra ny avokavoka. Io fotoana io dia efa azo ho lazaina fa viable ilay foetus satria raha teraka dia afaka miaina ivelan'ny kibo ny foetus sasany. Fitadiavana maro teo amin'ny kianjan'ny fitsaboana dia nahatonga ho tanteraka ny hitànana ny fiainan'ny zazakely teraka alohan'ny fotoana.
Amin'ny herinandro 24 dia mivoha indray ny hodi-maso ary mipihi-maso sy taitaitra ilay foetus. Io fihetsika io, izay manaraka tabataba tampoka dia hita aloha kokoa eo amin'ny foetus vavy.
Araky ny fitadiavan'ny olona mamotopototra dia ny fanatrehina tabataba mafy loatra dia mety manimba ny fahasalaman'ny foetus. Manaraka izany dia mety mitempo bebe kokoa ny fo, mitelina be loatra ny foetus, ary miova tampoka ny fihetsika. Ny zavatra afaka mitranga afaka fotoana elaela dia fahaverezan'ny fandrenesana.
Ny hafainganan'ny hiainan'ny foetus dia afaka tonga hatramin'ny cycles -na inhalation-exhalation 44 isaky ny 1 minitra.
Mandritry ny trimestre faha-3ny maha-bevohoka Ny fitomboan'ny atidoha aingana dia maka ny hery mihoatra ny 50% eo amin'izay ampiasain'ny foetus. Ny halehiben'ny atidoha dia mitombo eo amin'ny 400 sy 500% eo ho eo.
Amin'ny herinandro 26 dia miteraka ranomaso ny maso.
Vao herinandro 27 dia efa mamaly amin'ny mazava ny anakandria-maso. Io fihetsika io dia manamboatra ny haben'ny hazavana izay mahatratra ny rétine mandritry ny fiainana manontolo.
Ny zavatra ilaina rehetra andehanan'ny fofona ara-dalàna dia efa mipetraka. Fandinihana zazakely tsy tonga volona dia mampiseho ny fahazoana mandray fofona ao herinandro 26 aorian'ny fampiraisana.
Raha zavatra mamy no apetraka ao amin'ny fluide amniotique dia mampitombo ny habetsakin'ny fiteloman'ny foetus. Fa kosa, mihidina ny habetsakin'ny fiteloman'ny foetus raha hasiana zavatra mangidy. Miova ny endriky ny tarehy aorian'izany.
Mihetsiketsika ny tongotra ohatran'ny mandeha, ary mivadibadika ny foetus.
Ohatran'ny tsy dia miketrona no fahitana ilay foetus satria miampy ny tavy mipetraka ao ambanin'ny hoditra. Ny tavy dia manana anjara lehibe amin'ny fandehanan'ny température'ny vatana ary mitahiry hery aorian'ny fiterahana.
Amin'ny herinandro faha- 28 dia afaka manavaka feo avo sy iva ny foetus.
Amin'ny herinandro faha-30 dia matetika kokoa ny fihetsikin'ny aina ary dia hita 30 hatramin'ny 40%-ny fotoana eo amin'ny foetus antonontonona habehy.
Mandritry ny volana 4 farany ny maha-bevohoka dia mampiseho fotoana fihetsehina mitohy ny foetus ary manaraka izany ny fotoana fialàna sasatra. Ireo fihetsika ireo dia mampiseho ny fahasarotan'ny système nerveux central.
Amin'ny herinandro faha-32 eo ho eo dia misy alvéoles na cellules d'air, manomboka miforona ao amin'ny avokavoka. Ny fitomboan'ireo dia mitohy hatramin'ny 8 taona aorian'ny fiterahana.
Amin'ny herinandro 35 dia afaka mamihina mafy ny foetus.
Ny fahitan'ny foetus zavatra samihafa no mahatonga azy mifidy tsiro samihafa rehefa teraka. Ohatra, raha nihinana anis ny renin'ireo foetus ireo, ny anis dia manome ny tsiron'ny réglisse, dia hita fa mifidy ny tsiron'ny anis ilay zazakely rehefa teraka. Ny zazakely vao teraka izay tsy nanandrana anis tao an-kibo dia tsy tia ilay tsirony.
Ny foetus dia manatanteraka ny fihetsi-jaza rehefa mamoaka hormone maro atao hoe oestrogène izy ary manomboka ny fandalovana amin'ny toetra-ny foetus ho lasa zazavao.
Ny fihetsi-jaza dia miseho rehefa mifintina mafy dia mafy ny utérus, ary vokatr'izany ny fiterahana.
Manomboka amin'ny fampiraisana hatramin'ny fiterahana ary aorian'izany dia aingana, mitohy, ary sarotra ny fivoaran'ny olombelona. Ny zavatra tsy fantatra taloha momban'io fiovana mahagaga io dia mbola mampiseho fa ny fitomboan'ny foetus dia manana anjara lehibe amin'ny fahasalamana mandritry ny fiainana iray manontolo.
Ny fandrosoan'ny fahazoantsika momba ny fitomboan'ny olombelona am-potony no hitondra antsika hanatsara ny fahasalamana - aloha sy aorian'ny fiterahana.